खुसीको खबर! को’रोना विरु’द्धको खोपको परीक्षण सफल, पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने – Sanchar Patrika
खुसीको खबर! को’रोना विरु’द्धको खोपको परीक्षण सफल, पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने
एजेन्सी,२५ साउन । रुसले को’रोना वि’रुद्धको खोप आफुले निर्माण गर्न सफल भएको दा’बी गरेको छ । के अब यसले को’रोना भा’इरस विरुद्धको ल’डाँइलाई जित्ला ? संसारभर रुसले बनाएको भनेको यो खोपबारे निकै चर्चा चलिरहेको छ । रुसले १२ अगस्टमा कोरो’ना वि’रुद्धको खोप दर्ता गर्ने जनाएको छ। रुसका उपस्वास्थ्य मन्त्री ओलेग ग्रीडनेभले १२ अगस्टमा को’रोना भा’इरस विरु’द्धको खोप दर्ता गर्ने र आगामी महिनाबाट उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले खोप बताउनुभयो । यो खोप रक्षा मन्त्रालय र गामलेया रिसर्च इन्स्टिच्यूटले संयुक्त रुपमा विकास गरेका हुन्।
रुसले मानिसमा गरिएको अन्तिम चरणको खोपको परीक्षण सफल भएको र छिट्टै बजारमा खोप ल्याउने बताएको छ । जुन १८ देखि क्लिनिकल ट्रायल भएको थियो । परीक्षणमा सहभागी सबैको रोग प्रतिरक्षा विकास भएको पाइएको थियो । पहिलो चरणको परीक्षणमा सहभागि भएकालाई जुलाई १५ र दोस्रो चरणकोलाई जुलाइ २० मा डिस्चार्ज गरिएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा खोपको उत्पादन हुने बताउनुभयो। संसारभर सय भन्दा बढी खोपको परीक्षण भइरहेको छ जसमा केहीको अन्तिम परीक्षण चलिरहेको छ यद्यपी हालसम्म आधिकारिक रुपमा को’रोना वि’रुद्धको खोप आइसकेको छैन । गत डिसेम्बरबाट देखिएको कोरो’ना संक्र’मणबाट संसारभर १ करोड ९४ लाख ९९ हजार मानिस बि’रामी भएका छन् भने ७ लाख २३ हजार ८८९ संक्र’मितको मृ’त्यु भइसकेको छ । १ करोड १८ लाख ६४ हजार संक्र’मित निको भएका छन्।
Prevसेना परिचालन, हिँडडुल गर्न पनि नपाईने
Nextह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस कुन देशको कति?
कक्षा १२ को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि बल्ल आयो निकै खुसीको खबर
यी हुन यौ’न सन्तुष्टिका लागि हरेक दम्पतीले जान्नैपर्छ यी ५ कुराहरु…
असोज महिना निकै राम्रो छ यि ९ राशिको भाग्य, तपाईको राशि कुन ? (भिडियो)
खानपिन र मलमुत्र त्यागबिना ७५ वर्षसम्म बाँचेकी ९० वर्षे वृद्धको निधन
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6244)
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2734)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2380)